डकुमेन्ट्री/सर्ट मुभी किन बनाइन्छ ?- हेलो शुक्रबार - कान्तिपुर समाचार
डकुमेन्ट्री/सर्ट मुभी किन बनाइन्छ ?
माघ ५, २०७४ सजना बराल
काठमाडौँ — डकुमेन्ट्री वा सर्ट फिल्म बनाउनेको संख्या बढ्दो छ । राजधानीमा आयोजना हुने फिल्म फेस्टिभलहरुमा उनीहरुको काम देख्न पाइन्छ । नयाँको आगमनले फिल्मको स्तरोन्नति भइरहेको छ । यस विधाले दर्शकको साथ पनि राम्रैसँग पाउन थालेको छ ।
एउटै डकुमेन्ट्री बनाएर निर्देशकहरु देश/विदेशका फिल्म फेस्टिभलमा पुग्न थालेका छन् । अहिलेका केही उम्दा डकुमेन्ट्री/सर्ट मुभी निर्माता :
१. इन सर्च अफ द सर्चम्यान
२. ह्वेन स्याल आई सी माई ड्याडी
३. वार क्राइम
४. सेभ गंगामाया
स्टोरी टेलिङको उत्कृष्ट माध्यम डकुमेन्ट्री हो भन्ने लाग्छ । निश्चित समयको घटना वा विषयवस्तु डकुमेन्टेसन गर्दा पछि त्यो समयबारे थाहा पाउन सकिन्छ । मान्छेहरूले त्यो बेला के भएको रहेछ भनेर बुझ्छन् । कसैलाई ती विषयमा थेसिस नै लेख्नुपर्‍यो भने पनि डकुमेन्ट्री सन्दर्भ सामग्री बन्न सक्छन् । यस्तै विशेषताले गर्दा मलाई फिल्म निर्माणको यो विधा खुबै मनपर्छ ।
म प्राय: मानव अधिकारसम्बन्धी कथावस्तु समात्न खोज्छु । यो विषयमा काम गर्न अलि गाह्रै हुन्छ । सम्बन्धित पात्रसँग पहुँच जुटाउनुपर्‍यो, तिनको विश्वास जित्नुपर्‍यो, क्यामराप्रति सचेत नहुने अवस्थामा पुर्‍याउनुपर्‍यो । यसमा समय लाग्छ । त्यसैले म वर्षको एक/दुइटा मात्र डकुमेन्ट्री बनाउन भ्याउँछु । खिच्नेदेखि निर्देशन, सम्पादन र भाषानुवादसमेत आफैं गर्छु ।
डकुमेन्ट्री तयार भएपछिको आनन्द हुन्छ । तर, प्रदर्शनको दिन साह्रै नर्भस हुन्छु । डकुमेन्ट्री वा सर्ट फिल्मबाट न्यारेटिभतिर लाग्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ । उहाँहरूमध्ये कतिले डकुमेन्ट्री निर्देशनबाट आर्जन गरेको नाम कथानक फिल्म बनाएर गुमाउनु पनि भएको छ । हाम्रा फिल्म प्रदर्शन गर्ने भेन्युसमेत छैन नेपालमा । यही कुराको दु:ख लाग्छ ।
फिल्म मेकिङमा लाग्छु भन्ने सोच थिएन । सन् २०१७ मा ओनियन फिल्म्सले आयोजना गरेको ‘हर स्टोरी : अ मुभी मेकिङ वर्कसप फर योङ वुमेन’ मा भाग लिएपछि यतातिर मोडिएँ । त्यसमा मैले आधारभूत कुराहरू सिकेकी थिएँ । त्यही कार्यक्रममा मेरो स्टोरी आइडिया छानिएपछि मलाई अब योक्षेत्रमै लाग्नुपर्छ भन्ने भयो । अनि फटाफट दुई फिल्म (सर्ट मुभी र डकुमेन्ट्री) बनाएँ । दुवैलेपुरस्कार पाए ।
म पहिला पत्रकारिता गर्थें । त्यो छोडेर रिसर्चमा लागें । ती दुवैको अनुभवले डकुमेन्ट्री मेकिङमा धेरै सघाएका छन् । म पत्रकारिताबाट प्राप्त सामान्य ज्ञान र अनुसन्धानबाट मिलेको ‘इन–डेप्थ हुनुपर्छ’ भन्ने ज्ञानलाई डकुमेन्ट्रीमा मिसाउन खोज्छु । फिक्सन नै गर्दा पनि मेरो फिल्म विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक हुँदैन । तथ्यमै आधारित भएर बनाउँछु । सानो टिम र थोरै लगानीमै बनाउन सकिने भएकाले मलाई डकुमेन्ट्री विधा मनपर्छ ।
१. स्ट्रगल इन के–पप
बेलायतको एन्जेलिया रस्किन युनिभर्सिटीबाट फिल्म एन्ड मिडिया स्टडिजमा स्नातक गरेर फर्किएपछि मैले डकुमेन्ट्री निर्देशनमा हात हालें । त्यसअघि फोटोग्राफी गर्थें । केही म्युजिक भिडियोमा क्रिएटिभ डाइरेक्टरका रूपमा काम गरें । काठमाडौं अन्तर्राष्ट्रिय माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल (किम्फ) मा जोडिँदाको अनुभव पनि छ मसँग ।
मलाई फिक्सन फिल्ममा त्यति रुचि छैन । सबै कुरा बनावटी हुने भएकाले हेरुन्जेल रमाइलो मात्रै लाग्छ । डकुमेन्ट्रीसँग म आफूलाई बढी जोड्ने गर्छु, त्यसका पात्र र घटनासँग आफूलाई रिलेट गर्छु । वास्तविक जीवनका हिरोहरू डकुमेन्ट्रीमा भेटिन्छन् । म आफैं पनि त्यस्तै पात्र खोज्दै बस्छु । महिला वा पिछडिएका मान्छेहरूका प्रेरणादायी कथाहरू उजागर गर्न मनपर्छ । डकुमेन्ट्री यस्तो माध्यम हो जसले योग्य मान्छेलाई अवसर दिन सक्छ ।
म फिल्म क्षेत्रमा लागेको ७/८ वर्ष भयो । करिब ४० वटा फिल्ममा एसिस्टेन्ट डिरेक्टर भएर काम गरें । कान्तिपुर फिल्म एकेडेमीमा निर्देशनको कोर्स गरेपछि चाहिँ मैले एसिस्ट गर्न छोडेको हुँ । शिव रेग्मी, विकास आचार्य, नीर शाहलगायत थुप्रै जनाको फिल्ममा सहनिर्देशक भएको छु । एक वर्षमा ८ वटासम्म फिल्ममा त्यसरी काम गर्दा आफ्नो निर्माण/निर्देशन थोरै ढिलो हुन गयो ।
म सामाजिक विषयमा आधारित छोटा फिल्महरू बनाइरहेको छु । लामो फिल्मका लागि अभ्यास हो । यसले आत्मविश्वास बढाउँछ । म आफंैलाई छोटो फिल्मका लागि कुमार र फिचरलाई विवाहित भन्न रुचाउँछु । कुमार हुँदा बेतालले काम गर्न पाइन्छ । विवाह गरेपछि अनेक बन्धन आइपर्छ, सबैको चित्त बुझाउनुपर्छ । सर्ट फिल्म मज्जा हो तर दर्शकलाई आफ्नो कन्सेप्ट बुझाउन गाह्रो हुन्छ ।
१. द साइलेन्स अफ रिक्सा
म मान्छेहरूबाट प्रभावित हुन्छु । उनीहरूका अनुभव वा घटनाहरूलाई रिलेट गर्न सकें भने राम्रो आउटकम दिन सक्छु भन्ने लाग्छ । नन–एक्टर्ससँग काम गर्दा सहज महसुस हुन्छ मलाई । यसलाई नै मेरो विशेषता भने पनि भयो । साथै, म ककटेल निर्देशक हुँ । आर्ट र कमर्सियल दुवै पक्ष मिसाएर फिल्म बनाउन रुचाउँछु ।
यो क्षेत्रमा लागेको ९ वर्ष भयो । एक्टर्स स्टुडियोमा अभिनय सिकें, ओस्कार कलेजमा फिल्म निर्देशनबारे पढें । अझै पनि सिक्ने र पढ्ने क्रम जारी छ । थिएटरको अनुभवले मलाई निर्देशनमा धेरै सघाइरहेको छ । म कलाकारलाई राम्ररी गाइड गर्न सक्छु । नन–एक्टर्ससँग काम गर्ने भएकाले मलाई अभिनयबारे झन् धेरै जानकारी हुनु आवश्यक थियो । यो आवश्यकता अभिनय अनुभवले पूर्ति गरिरहेको छ ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७४ ०९:०३
वन्यजन्तु र चरा पछ्याउँदै
माघ ५, २०७४ अब्दुल्लाह मियाँ
काठमाडौँ — बैतडीको तल्लो स्वराड क्षेत्रमा चितुवाले सताउन थालेको धेरै वर्ष भइसक्यो । तीन वर्षयता त्यस क्षेत्रमा चितुवाको आक्रमणबाट दुई दर्जन बढी मानिसले ज्यान गुमाइसके । त्यसरी किन चितुवा मान्छेमाथि जाइलागे भनेर सरकारले ध्यान दिएको छैन ।
यसै बेला त्रिविको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागका धीरेन्द्रबहादुर चन्द चितुवा र मानवबीचको द्वन्द्वबारे अध्ययन गर्न स्वराड क्षेत्रमा जुटेका छन् । उनको अध्ययनको क्षेत्र साविकको विशालपुर, सलेना, पञ्चेश्वर, महाकाली, मेलौली हो । पहिलो चरणमा उनले त्यस क्षेत्रमा अटोमेटिक क्यामरामार्फत चितुवाको क्रियाकलाप पत्ता लगाउँदै छन् । ‘यसबाट ती जनावरको संख्या र तिनको गतिविधि थाहा हुनेछ,’ उनले भने ।
अरू जीव भेटेसम्म चितुवाले मान्छेलाई आक्रमण त गर्दैन । चितुवाको आहारमा मान्छे १० देखि १२ औं स्थानमा पर्छ । ‘चितुवाबाट कसरी सतर्क हुन सकिन्छ भनेर पत्ता लगाउनु पनि मेरो अध्ययनको उद्देश्य हो,’ चन्द सुनाउँछन्, ‘चितुवाको बासस्थान पनि सुरक्षित बनाउन मान्छेले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश फैलाउनेछु ।’ इकोलोजी र कन्जरभेसन बायोलोजीमा स्नातकोत्तर चन्दले शुक्लाफाँटामा पाइने पुड्के खरायोका बारेमा पनि अध्ययन गरेका छन् । उनी डल्फिन गणनामा पनि सहभागी थिए ।
रातो र पहरे बाँदरका बारेमा पनि त्यति धेरै अध्ययन भएको छैन । अझ बाँदरका बच्चा र आमाका गतिविधिबारेको रिसर्च त शून्यप्राय: छ । त्यसैलाई अगाडि बढाउने अभियानमा छिन्, त्रिविको प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागकी शोधकर्ता पूजा उपाध्याय । रातो (रेसस मङ्की) र आसामी (पहरे बाँदर) को आमा र बच्चाबीचको सम्बन्धबारेमा उनले शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज र वरपरको जंगलमा अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘नागार्जुन वन र बालाजु बाइसधारा क्षेत्रमा बच्चा र सम्बन्धित आमाको गतिविधि तथा आपसी सम्बन्ध र अरूसँगको व्यवहारको आँकडा संकलन गर्दैछु,’ उनले भनिन् ।
बच्चासँग घुलमिल हुन र स्याहार गर्न अघि सर्ने पोथीहरू, बच्चाको दिदी, सानीआमा, ठूलीआमा, हजुरआमा अथवा कति नजिकका हुन्छन् भन्नेबारे आफ्नो अध्ययन जारी रहेको पूजाले सुनाइन् । उनको पहिलो चरणको अध्ययनले दुवै प्रजातिका बाँदर ऋतुकालमा वयस्क पोथीको भालेसँग संसर्ग बढी हुने गरेको देखाएको छ ।
‘बच्चा जन्मेपछि आमाले कुन प्रजातिको भालेसँग निकटता बढाउँछ र सम्भावित सफल बाबु भएको अनुमानमा अगाडिका दिनमा तिनका सम्बन्धको अध्ययन पनि गर्नेछु,’ उनले भनिन् । यसको निक्र्योलले वन्यजन्तु स्थानान्तरण गर्दा परिवारनछुट्याई सगोलमा लैजान सजिलो हुनेछ भने बच्चाको परिवेश र आमाले गरेका अरूसँगको व्यवहारले बच्चाको स्वभावबारे जानकारी पनि दिनेछ ।
‘बाँदरलाई नजिकबाट हेरिन्छ तर छुइँदैन र समातिन्न पनि,’ फोकल स्याम्पलिङ विधि अपनाएकी पूजाले भनिन्, ‘क्यामरा, दूरबिन तथा अन्य यन्त्रबाट हेरेर आफूलाई चाहिने सूचना लिइन्छ ।’ विश्वमा सबै प्रजातिको अध्ययनमा लागू गरिएको यस विधिबाट कुन परिस्थितिमा कसरी बच्चा हुर्काउँदा बच्चाको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने थाहा हुने उनको विश्वास छ ।
‘रातो बाँदरभन्दा पहरे बाँदरका भालेहरू बच्चाप्रेमी हुन्छन् भनिन्छ, त्यो पत्ता लगाउने मेरो उद्देश्य हो,’ उनी भन्छिन्, ‘बाँदर र मानिसबीच धेरै समानता हुन्छ र केटाकेटी हुर्काउने तरिका पनि झन्डै मिल्छ, ती पक्ष पनि हेर्नेछु ।’
प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागकै सन्तोषी रेग्मी तराईमा पाइने अर्नाको आनीबानी र तिनको संरक्षणका चुनौती अध्ययनमा जुटेकी छन् । ‘अर्नाको खाना खाने आनीबानीमा केन्द्रित भएर रिसर्च गर्दैछु,’ रेग्मीले भनिन्, ‘अर्नाको संरक्षणका चुनौतीबारे पनि जानकारी हासिल गर्नेछु ।’ उनको रिसर्चको क्षेत्र अर्नाको मुख्य बासस्थान रहेको कोसीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष हो ।
‘अर्नाले केके वनस्पति खान्छ, त्यो हेरिसकें,’ उनले भनिन््, ‘अब संरक्षणका लागि के कस्ता मानवीय एवं प्राकृतिक असरहरू परेका छन् भन्ने जानकारीका लागि आरक्ष वरपरको अवस्था अवलोकन गरी स्थानीय बासिन्दासँग छलफल गर्नेछु ।’ उनको प्रारम्भिक अध्ययनले कोसीटप्पुमा रहेका अर्नामा प्राकृतिकभन्दा मानवीय असर धेरै परेको देखाएको छ । ‘अन्य वन्यजन्तु तथा घरपालुवा भैंसी आरक्षभित्र निर्बाध रूपमा प्रवेश गर्ने हुँदा घरपालुवा भैंसीसँग मिश्रित भई वंशमा अशुद्ध हुन सक्ने खतरा देखिएको छ,’ उनले भनिन् ।
प्राणीशास्त्र केन्द्रीय विभागकी अर्की शोधार्थी रविता दुवाल प्रेमको प्रतीक मानिने सारस चराको रिसर्चमा जुटेकी छन् । उड्नेमध्ये सबभन्दा ठूलो चरा सारस हो र यो नेपाललगायत १५ देशमा पाइन्छ । कृषि क्षेत्रको अतिक्रमण, अनावश्यक विषादीको प्रयोग, सिमसार क्षेत्रको अतिक्रमणलगायतले सारस लोपोन्मुख बन्दै गएको छ ।
दुवालले लुम्बिनी क्षेत्रमा सारसबारे अनुसन्धान गरिरहेकी छन् । उनका अनुसार कृषियोग्य जमिन, प्रशस्त सिमसार र उष्ण हावापानी भएकाले लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थायी रूपमा सारस बसोबास र प्रजनन गर्छन् । ‘मैले लाइन ट्रान्सेक्ट विधिबाट संख्या तथा तिनको उपयुक्त बासस्थान र आनीबानी लगायतको तथ्यांक संकलन गरेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘आनीबानीबारे थाहा पाउन दुई जोडी सारसलाई निरन्तर निरीक्षण गरेको थिएँ ।’
उनको अनुसन्धानबाट लुम्बिनी क्षेत्रमा १८० सारस भेटिए । तीमध्ये भाले र पोथी सारस बराबर थिए तर ४ वटा सारसको लिंग छुट्याउन नसकेको उनले बताइन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी ३६.६७५ प्रतिशत सारस भेटिएका थिए । अध्ययनका क्रममा ८१.११ प्रतिशत सारस खेतबारीमा पाइएको थियो । ‘सारसले गुँड बनाउन सिमसार क्षेत्रभन्दा बढी कृषि भूमिको प्रयोग गरेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘सारस संरक्षणका लागि खेतीयोग्य जमिनको जगेर्ना गर्नुपर्ने देखियो ।’ बालीमा लाग्ने किरा, चिप्लेकिरा र शंखेकिरा खाने भएकाले सारस किसानको मित्र पनि भएको उनको बुझाइ छ ।
प्रकाशित : माघ ५, २०७४ ०८:५८